Akụkọ - Akụrụngwa nke Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe
Akụkụ nke Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe
Igwe eletrik zuru ezu nke igwe eletrik chọrọ ihe dị iche iche iji mepụta ọkụ eletrik, gbanwee ike gaa na nke ugbu a nke ndị ọrụ ụlọ nwere ike iji, chekwaa ọkụ eletrik ma chekwaa nchekwa.
Anyanwụ bụ akụkụ kachasị ọhụụ nke sistemụ eletriki anyanwụ. A na-arụnye ogwe ọkụ nke anyanwụ n'èzí ụlọ, na-adịkarị n'elu ụlọ ma gbanwee ìhè anyanwụ ka ọ bụrụ ọkụ eletrik.
Nsonaazụ fotovoltaic bụ usoro nke ịtụgharị ìhè anyanwụ na ọkụ eletrik. Usoro a na-enye igwe ikuku nke aha ha ọzọ, PV.
A na-enye ọkwa ogwe aka site na watts. Ntụle a bụ nke kachasị mepụtara site na panel n'okpuru ọnọdụ dị mma. Mmepụta kwa panel dị n’etiti 10 na 300 watts, na 100 watts ga-abụ nhazi nkịtị.
Solar Array arịọnụ Racks
A na-esonye ogwe igwe site na nhazi ma na-ejikarị otu n'ime ụzọ atọ: n'elu ụlọ; n’elu ogidi n’elu uwe ndị kwụ ọtọ; ma ọ bụ ozugbo na ala.
Sistemụ a na-etinye n’elu ụlọ bụ ihe a na-ahụkarị, ọ ga-abụkwa na usoro iwu maka ịhazi mpaghara chọrọ ya. Approachzọ a dị mma ma dị mma. Nsogbu kachasị nke ịrị elu ụlọ bụ mmezi. Maka ụlọ dị elu, ikpochapu snow ma ọ bụ mezie usoro nwere ike ịbụ nsogbu. Panels anaghị achọkarị mmezi, agbanyeghị.
Eguzo ọtọ, ndokwa n'osisi ịtọgbọrọ nwere ike ịtọ elu nke na-eme ka mmezi dị mfe. A ga-atụle uru nke mmezi dị mfe megide oghere ọzọ achọrọ maka nhazi.
Usoro ala dị ala ma dị mfe, mana enweghị ike iji ya na mpaghara nwere snow mgbe niile. Oghere na-atụlekwa ihe ndị a.
N'agbanyeghi ebe ị rutere n'ugwu ahụ, a na-edozi ugwu ma ọ bụ na-achọpụta. Edoziri ndozi edoziri maka ịdị elu na akuku ma ghara imegharị. Ebe ọ bụ na akụkụ nke anyanwụ na-agbanwe n'afọ niile, ịdị elu na akuku nke usoro nhazi ugwu bụ nkwekọrịta nke na-azụ ahịa kachasị mma maka nrụnye dị ọnụ ala karịa, nke na-adịchaghị mgbagwoju anya.
Arratọ nkata na-esochi anyanwụ. Usoro nchịkọta na-aga anyanwụ site na anyanwụ na anyanwụ ma gbanwee akụkụ ha iji chekwaa nke ọma ka anyanwụ na-agagharị.
Array DC kwụpụ
A na-eji disconnecting nke Array DC ewepu ihe ndi ozo di na mbara igwe site na ulo maka mmezi. A na-akpọ ya disconnect DC n'ihi na usoro mbara igwe na-emepụta ike DC (direct current).
Ogwe igwe na batrị na-emepụta ike DC (nke dị ugbu a). Homekpụrụ ụlọ eji eji AC (alternating current). Onye ntụgharị na-agbanwe ike DC nke sitere na bọlbụ na batrị site na anyanwụ na ike AC nke akụrụngwa chọrọ.
Usoro ike anyanwụ na-emepụta ọkụ eletrik n'oge ehihie, mgbe anyanwụ na-awa. Yourlọ gị na-achọ ọkụ eletrik n’abalị na ụbọchị igwe ojii - mgbe anwụ anaghị acha. Iji mezue nkwekọrịta a, enwere ike ịgbakwunye batrị na sistemụ.
Mita ike, Mkpa uru Mita, Kilowatt Mita
Maka sistemụ nke na-ejikọ eriri na grid ịba uru, igwe ike na-atụle ike nke ejiri site na ntanetị. Na sistemụ ndị e mere iji ree ike ọrụ ahụ, igwe ike na-atụkwa oke ike nke sistemụ anyanwụ na-eziga na ntanetị.
Maka sistemụ ndị anaghị agbakwunye na ntanetị bara uru, a na-eji generator iji nye ike n'oge oge nke usoro sistemụ dị ala n'ihi ihu igwe na-adịghị mma ma ọ bụ nnukwu ụlọ. Ndị nwe ụlọ na-eche banyere mmetụta gburugburu ebe obibi nke ndị na-enye ọkụ nwere ike iwunye igwe na-enye ọkụ na-agba mmanụ ọkụ ọzọ dịka biodiesel, kama mmanụ ụgbọala.
Ogwe Mgbaji, Ogwe AC, Ogwe Mgbasa Circuit
Ogwe ihe nkwụsịtụ bụ ebe a na-esonye isi iyi ike na sekit eletriki dị n'ụlọ gị. A circuit bụ a na-aga n'ihu ụzọ nke ejikọrọ waya na jikọtara ọnụ outlets na ọkụ na eletriki usoro.
Maka okirikiri nke ọ bụla enwere ihe mgbaji. Circuit breakers na-egbochi akụrụngwa dị na sekit adọta oke ọkụ eletrik ma na-ebute ọkụ ọkụ. Mgbe akụrụngwa dị na sekit na-achọ oke ọkụ eletrik, onye na-agbaji sekit ga-agbanyụ ma ọ bụ gawa, na-egbochi ọsọ eletrik.
Onye nchịkwa chaja
Onye na - ahụ maka ụgwọ - nke a makwaara dị ka onye na - achịkwa ụgwọ - na - ejigide voltage kwesịrị ekwesị maka batrị sistemụ.
Enwere ike ichikota batrị, ma oburu na inye ya voltage. Onye na-ahụ maka ụgwọ na-achịkwa volta ahụ, na-egbochi inyefe ikike ma na-ekwe ka ịchaji mgbe achọrọ. Ọ bụghị sistemụ niile nwere batrị: maka ndị ọzọ gbasara ụdị sistemụ, lee: Tydị 3 nke Residential Solar Power Systems.
Post oge: Ọgọstụ-24-2020